Roobabkii Guga oo Ka Curtay Deegaamo Ka Tirsan Gobolada Puntland – Radio Daljir
Abriil 26, 2017 5:42 g 0
Roobabkii gu’ga ayaa ka curtay deegaanno badan oo gobollada Puntland ah iyo meelo ka baxsanba, Meelaha raxmaddaasi gu’gu ka hoortay saacadihii ugu dambeeyey ee ka tirsan Puntland waxaa ka mid ah deegaanno badan oo ka kala tirsan gobollada Sanaag, Haylaan, Karkaar, Bari, Mudug iyo Sool.
Gobollada Sanaag iyo Haylaan oo ka mid ah meelaha roobabka fiican ka da’een saacadihii ugu dambeeyey, ayaa la tilmaamayaa roobabka helay in ay iskugu jiraan doogsin baraagaha buuxiyey iyo xareed dhacmo kookooban, waxaana ka mid ah meelahaas roobabku heleen ee Sanaag iyo Haylaan deegaannada Yubbe, Ceelbuh, Kaladhacda, iyo meelo kale oo isla labadaas gobol ah.
Gobollada Bari iyo Karkaar ayaa iyana meelaha qaar roobab wanaagsani ka hooreen, halka Mudug iyo Soolna dhawr meelood roobab ka da’een, waxaana meelahaasi ka mid ah deegaanno hoosyimaada Jarriiban.
Dhinaca kale, inta badan gobollada Puntland wararkii ugu dambeeyey waxaa ay sheegayaan jiritaan cusboonaan xagga cirka ah iyo jawi roobaad, iyadoo daruuraha biyeysan ay saameeleen cirka, lagana arkayo meelo badan hillaaca roobka caawa oo Arbaco ah.
Wixii warar ah oo ka soo kordha roobabka da’ay iyo cusaybka cirka Radio Daljir waxaa idinku soo gudbinayaa sida ugu degdegsan haddii Eebbe idmo.